BUKA: Izinkampani ezihamba phambili ngohlelo lokuqasha izifundiswa | News24
BUKA: Izinkampani ezihamba phambili ngohlelo lokuqasha izifundiswa
Cape Town - IMedia24 iwine indondo ye­-2017 SA Graduate Employers Association (SAGEA) award ngokuba yinkampani yezokuxhumana (media company) enohlelo oluhamba phambili lokuqashwa kwezifundiswa.
IMedia24 isiwine le ndondo izikhathi ezinhlanu eminyakeni eyisithupha edlule. Ezinye izinkampani ebezilandela iMedia24 kube yiSABC kanye neMultiChoice, babaphume isibili kanye nesithathu.
Ama-SAGEA Employer Awards agubha ukuzuza kwabaqashi abahamba phambili eNingizimu Afrika. Abantu abaphumelele ukuthola imisebenzi ngemuva kokufuna imisebenzi ezinkampanini eziqasha izifundiswa yibona abaqoka ngokuphelele izinkampani eziwinayo, ngokusho kwe-SAGEA. Kwinhlolovo eyenziwe ngonyaka ka-2017 bangu-1 969 abantu ababambe iqhaza.
Umuntu ngamunye obambe iqhaza ucelwe ukuba asho izinkampani ezimbili abona ukuthi yizona ezinohlelo oluhle lokuqasha izifundiswa emikhakheni ethize noma ezimboneni ezithize anokujwayelana nazo. Belungekho uhlu lwezinkampani okhetha kuzona – izimpendulo zabo bezingaphekiwe. Lokhu kwenzelwe ukuthi kungabikhona ukwakheka kwemibono ethile ngabaqashi abathile labo abebebambe iqhaza abebengabayamanisa nezimboni ezithile.
Umqashi (inkampani) ohamba phambili kanye nezinkampani ezimbili ebezilandela (eziphume isibili nesithathu) ziqoshwe emikhakheni engu-24 eyehlukene nokube yiwona mongo wama-Graduate Employers of Choice 2017.
Emkhakheni we-accounting, iPwC izidlele amahlanga, kwathi iKPMG kanye neDeloitte baphuma isibili kanye nesithathu.
Elinye lamabhange amakhulu kuleli, uStandard Bank, uzidlele amahlanga emkhakheni weCommercial and Retail Banking, walandelwa uFirst National Bank kanye noNedbank.
Izinkampani ezintathu ziphume phambili ezimbonini ezimbili ezehlukene: uSasol uthole amavoti amaningi emkhakheni we-chemical kanye ne-pharmaceutical kanye nezobunjiniyela noma i-industrial sectors; i-Unilever izidlele amahlanga emkhakheni we-FMCG kanye ne-manufacturing; kanti uDiscovery wona izigwazele ibhece emkhakheni wezempilo kanye nemishwalense.
* IFin24 neZindaba24 bayingxenye yeMedia24.
Zibonele lezi zinkampani eziqwaqwade ezinye emakhanda ngokwehlukana kwazo ngezansi: